विद्युतीय सवारी–साधनका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ बनाइँदै, महशुल कति त? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > विद्युतीय सवारी–साधनका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ बनाइँदै, महशुल कति त?
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी–साधन सन्चालनका लागि सहज बनाउने लक्ष्यका साथ २० ओटा ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गर्ने भएको छ ।
विद्युतीय सवारी–साधनको प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा विशेष जोड दिइएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा विद्युतीय सवारी–साधनको प्रयोगलाई देशवयापी बनाउन पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश छ ।
सरकारले केही दिनपहिलेमात्रै साझा यातायातलाई ३०० विद्युतीय बस खरिदका लागि रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ ।
यस्तै, प्रदेश नम्बर–३ सरकारले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा नै विद्युतीय सवारी–साधन सन्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
चार्जिङ स्टेसनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । त्यस्ता स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन बोलपत्रको कामसमेत सुरु भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल १३ ओटा चार्जिङ स्टेसन सन्चालनमा रहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनकाअनुसार विद्युतीय सवारी–साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको हो ।
पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी–साधनको आकर्षणसमेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस सन्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारी–साधनको दैनिक सन्चालन खर्चसमेत निकै कम हुने भएकाले पनि आकर्षण बढेको हो । मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी–साधनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
चालू आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार २०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् जोडिने भएकाले पनि विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार विद्युतीय सवारी–साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट काम सुरु भइसकेको छ । त्यसो त प्राधिकरणमा यसअघि नै चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइ सन्चालनमा आइसकेको छ ।
यस्तै, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी–साधनको चार्जिङ स्टेसन सन्चालन गरिसकेको छ ।
तर, चार्ज गर्दा तिर्नुपर्ने महशुलको विषयमा भने हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले सो विषयमासमेत छिट्टै निर्णय हुने जनाएको छ । -रासस
२०७६ साउन २५ गते १६:२८ मा प्रकाशित
धादिङको दरिगांल खोलामा डुबेर बेपत्ता दुई युवाको शव भेटियो
सरकारी जग्गाको लालपुर्जा सुकुवासीलाई
अब उपत्यका बाहिरका १७ शहरहरुबाट पनि सेयर कारोबार हुने
सेयर बजारमा हुने चलखेल रोक्न धितोपत्र बोर्डद्वारा समिति गठन !